तपाईँलाई अरिंगाल र मौरी बन्ने रहर छ कि भाले बन्न मन छ ? अथवा अरुलाई मुर्गा बनाउने कला सिक्न मन छ कि ? यी सबैभन्दा भिन्न कला जानेर कसैलाई चतुर्‍याइँपूर्वक धोबीपछाड धक्का दिन पो मन छ कि !तपाईँ नेकपा कार्यकर्ता हुनुहुन्छ वा नेकपा पस्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने अवसरहरु एसईई सकेर बसेका विद्यार्थीका लागि भन्दा धेरै खुल्ने संकेत छन् । नेकपा स्कुलमा हेडसर को हुने प्रश्न एकाएक जटील भएको कारण नै भविष्यमा खुल्न थालेका अवसरहरुको घना संकेत हो । सरकार बनाउन र चलाउन चाहिने सम्पूर्ण कला सिकाउने नेकपा स्कुलमा भर्ना हुने विद्यार्थीको लर्को सानो छैन ।
कार्यकर्तालाई अलमलमा पार्न सक्नु नेकपा स्कुलको असली खुबी हो । हेडसर जो भए पनि अबको नेकपा स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीले सिक्ने मुख्य ज्ञान